Sidee loo dhunkadaa marka ugu horeysa | Niman qurux badan
Sida loo dhunkado markii ugu horeysay
Dhunkashada markii ugu horeysay waa dhacdo xiiso leh oo u gudbisa neerfaha labadaba qofkaas oo aan waligii dhunkan qof, sida for qofka raba inuu dhunkado markii ugu horeysay qof aad jeceshahay.
Dhunkashada afka waa wax ku dhow oo ay la socoto xamaasaddaas iyo fursadda ah in lagu celiyo khibradda mar kale. Dad badan ayaa fursadan ku wareejiya qiimaha ay ku siin karaan shakhsiyadda wiilkaas ama gabadhaas, haddii uu noqon doono jacayl wanaagsan ama lammaane wanaagsan.
Waa in la ogaadaa in dhunkashada Waa in ay noqotaa mid kedis ah oo la rabo. Ma qorsheyn kartid inay kaamil noqoto sababtoo ah waxa aad rabtay ma dhici karto. Is diyaari oo ku faraxsanow wakhtigaas sababtoo ah waa mid gaar ah, si aad u ogaato furayaasha si aad u awooddo inaad dhunkasho iyada oo dhammaan xasilloonida adduunka.
1 Tallaabooyinka ugu horreeya ee dhunkashada markii ugu horreysay
2 Sida aan u siin shumiskii ugu horeysay
3 Waxa aan ku samayno gacmahayaga
4 Maxaa la sameeyaa shumiska ka dib
Tallaabooyinka ugu horreeya ee dhunkashada markii ugu horreysay
Waa muhiim inaad si fiican u doorato qofka aad dhunkasho, waa la door bidaa ha noqdo qof aad ku kalsoon tahay Si aad u raaxaysato, isku day marar badan oo kale oo ka dhig mid aan la ilaawi karin. Waa gabi ahaanba caadi in la dareemo ka hor dhacdo dhacdo dhici doonta markii ugu horeysay, laakiin sida caadiga ah mar walba way jeceshahay. Waa inaad is dejiso oo aad dejiso, uma maleynayo inay tahay markii ugu horeysay ama ugu dambeysay ee aad sameyso, markaa ku raaxayso daqiiqada.
Ha isku dayin inaad ku qasabto xaalada ha ku degdegin inaad samayso wax aan iskeed ahayn. Waxay u badan tahay inay tahay wax aad muddo dheer rabtay, laakiin sidoo kale waa inaad falanqeyso calaamadaha qofka kale ogow inay soo dhawaynayso. Nin ama naag marka ay si fool ka fool ah ula hadlayaan, waxay muujin karaan rabitaankooda ah inay dhunkadaan marka ay si joogto ah u eegayaan bushimaha qofka kale. Hadday sidaas tahay, raadi daloolkaas yar si aad u awooddo, adoon siinin wax badan oo ka dhiman.
Haddii aad tahay wiil ama gabadh xarrago leh, amaan dareento oo afkaaga nadiifi. Waa inaad leedahay neef cusub, ilko nadiif ah, haddii aad gabadh tahayna ku rinji bushimahaaga midab jilicsan oo dhalaalaya. La'aanteed lipstick waad awoodaa bushimahaaga carrabkaaga ku qoyso, si aanay u bixin taabasho qalalan oo aan fiicnayn. Bishimaha bishimaha ayaa sidoo kale si fiican u shaqeysa si ay u fuuq baxdo dibnaha macaan.
Sida loo sameeyo hickey
Sida aan u siin shumiskii ugu horeysay
Helitaanka wakhtigaas sixirka ah waa caqabada ay tahay inaad ka gudubto. Muuqaal sahlan oo indhaha ah iyo dareenka aad ku soo dhowaan karto ayaa noqon doona dhammaan waxaad u baahan tahay. Madaxaaga si jilicsan u leexi iyo hal dhinac si dhunkashada ay aad ugu raaxaysato.
In yar fur bushimahaaga, si tartiib ah ugu rogIsku day inaad shumiso gaagaaban dusheeda mid ka mid ah dibnaha ka dibna kan kale. Haddii hadhow aad rabto dhunkasho qoto dheer waxaad baran kartaa carrabkaaga, adigoo ah xiriir tartiib tartiib ah, oo tartiib tartiib ah, halkaas oo aad ku aragto dhadhanka qoyan. Haddii qofkaas uusan kugula xiriirin, ha isku dayin, waxaa laga yaabaa inaysan diyaar u ahayn.
Dhunkashada shaqo laba ah. Xusuusnow in qofku uusan ahayn inuu qabto dhammaan shaqada, laakiin si loo qaybiyo habkan 50%. Ha isku dayin inaad ka taliso xaalada Samaynta shaqada oo dhan kaligaa waxay ku siin kartaa aragtida xukunka. Neefsashada si fiican ayaa loo maamulaa sanka, maadaama afka laga sameeyo waxay noqon doontaa mid aad u xanaaqsan.
Laakiin haa waa taas mid uun baa xakamayn kara dhunkashada, iyadoo la og yahay in qofka kale uu la shaqeeyo. Indhahaaga ha xidho, madaxaaga dhinac u jeedi si sankaagu aanu kan kale ugu dhicin, waxaadna ku bilaabi kartaa shumis dheer, adigoon faruuryaha kala qaadin. Sidan ayaan ku gaari doonnaa in lagu soo celin karo. Ha u ogolaan dhunkashada wax ka badan 20 ilbiriqsi, way daali karaan. Waxa ugu fiican ayaa ah in la kala tago, la sameeyo xodxodasho yar oo aad dib ugu noqotid dhunkashada xiisaha leh.
Waxa aan ku samayno gacmahayaga
Marar badan waxaan diirada saarnaa mawduuca dhunkashada oo runtii ma garanayno waxa aan ku samaynayno gacmaheena. Haddii aad awood u leedahay inaad xakamayso, waad awoodaa laabtaada laab macaanQabo dhexda, salaax timaha, garbaha ama si jilicsan u qabo qoorta iyo daanka.
Maxaa la sameeyaa shumiska ka dib
Ahaanshaha dhunkashada ugu horreysa ee midkood, Waxaa laga yaabaa inay tahay daqiiqad naga dhigaysa guduudasho. Waxa ugu horreeya ee aan samayno waa in aan eegno qofka indhihiisa ka dibna dhoola cadeynaya farxad. Dhoola cadeyntaasi waxay noqon doontaa sida ugu wanaagsan ee aad uga gudbi karto shumis xamaasad leh. Markaa waad awoodaa laab weyn sii si loo dareemo dareenkaas.
Ka dib qaadashada tallaabada ugu horreysa, wax walba waa in ay si habsami leh u qulqulaan. Waxaa laga yaabaa in dhunkashadan ugu horreysa aad adigu samaysay, laakiin maaha inay mar walba sidaas ahaato. Dhunkashada waa xiriirka ugu horeeya ee qofka aad jeceshahay waxaana laga yaabaa inaad dareen fiican ka hesho, ama ma aadan jeclayn sida uu u dhunkaday. Waxba ma dhacaan, iska hubi in wax walba ay u socdaan si waafaqsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo dhunkado markii ugu horeysay
Kuwani waa noocyada dharka raaxada ee ugu fiican ee ragga